Ikhaya IZITOLO Zase-AFRAN FOOTBALL USamuel Eto'o Incwadi Yengane Yokufunda I-Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Sammy". Indaba yethu ye-Samuel Eto'o Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela esikhathini sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyayazi ifomu lakhe lokudlala imigomo kodwa abambalwa abheka uSamuweli u-Eto'o Bio othakazelisayo. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
USamuel Eto'o Ingane Yendaba Yabantwana Plus Untold Biography Facts-Ukuphila Kwangaphambili Nomkhaya
USamuel Eto'o Fils wazalwa ngosuku lwe-10th ka-Mashi 1981 eDouala, eCameroon. Wazalelwa kunina, u-Christine Eto'o (i-fishmonger) noyise, uDavid Eto'o (i-akhawuntiant). Ngezansi abazali abathandekayo bakaSamuel Eto'o.
Njengoba ekhula njengengane, u-Eto'o owayethanda ibhola wayenesifiso sokuba enye ye-Afrika engcono kakhulu. Ukufisa ukumbona ukuthi uqale yini umsebenzi wakhe we-club club I-Kadji Sports Academy eDouala eCameroon. U-Eto'o wenza iminyaka emine yokuqala yokuphila kwakhe ekwenzeni umzamo wakhe wokuthola ukuqashelwa kwezwekazi nokuziqhenya emhlabeni wonke.
Ukuthuthela eFrance: Ngo-1996, u-Eto'o wathuthela eFrance ukuze azame iqembu lebhola lebhola laseFrance. Ngokudabukisayo, walahlwa. Ngenxa yalokho, kwadingeka aphile njengomuntu ongaphandle ngokungemthetho ngenxa yokungabi namaphepha afanele nokukhomba.
Naphezu kokusebenza kwakhe, u-Eto'o usalokhu enamathele emaphupheni akhe nasezinxusweni zakhe ngisho nalapho ikusasa libonakala liphazamisekile ngebhola lakhe. Ngesikhathi esisodwa salezo zenzo u-Eto'o wathola ama-scouts avela ku-Real Madrid ngesikhathi edlala ibhola eFrance edolobheni laseLe Havre ngonyaka ka-1997.
USamuel Eto'o Ingane Yendaba Yabantwana Plus Untold Biography Facts-Umsebenzi we-Buildup
Nakuba u-Eto'o eqale ngokudlala iqembu leBal Madrid e-1997, ukuhlala kwakhe eqenjini lezinsizwa kwakungenakulinganiswa njengoba behluleka ukushaya umdlalo wesithathu waseSpain.
Ngenxa yalokho, i-Real Madrid inike uSamuel Eto'o ezinkampanini ezimbalwa ezihlanganisa neLeganes, Espanyol neMallorca, abathola amathuba amakhulu ku-African Immigrant. Akubanga nje isikhathi eside ngaphambi kokuthi uMallorca athenge u-Eto'o ngenkontileka engunaphakade ngonyaka we-2000 ngemali yokurekhoda yamaqembu e-£ 4.4 Million.
Ngemuva kokuthenga, u-Eto'o waqala umsebenzi ojabulisayo nokuthakazelisayo emsebenzini wakhe webhola ngesikhathi leso sikhathi sathola imigomo ye-11 eyamthola ama-encomiums kusuka kuma-pundits nakwabanye abezindaba.
USamuel Eto'o Ingane Yendaba Yabantwana Plus Untold Biography Facts-Ukuphakama Ekudumeni
USamuel Eto'o uxhaphaza eMallorca wathola ukunakekelwa kwamaqhawe aseSpain e-Barcelona ngonyaka we-2003. Ngonyaka ofanayo, u-Eto'o ubhalisele iBarcelona, ​​ukunyakaza okwakubonakala ukuqala kokukhula okukhulu kwe-Eto'o owabe ebhekene ne-Afrika emdlalweni wezemidlalo wamazwe ngamazwe.
Ngonyaka owodwa wokuthutha kwakhe, u-Eto'o akazange anikezelwe kuphela umdlali we-Afrika wonyaka wonyaka kodwa wanikela kakhulu ekuhambiseni iBarcelona ibe yinkathi yegolide. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
USamuel Eto'o Ingane Yendaba Yabantwana Plus Untold Biography Facts-Ukuphila Ubudlelwano
Izwi elivamile elilandela wonke umuntu ophumelelayo owesifazane akalutholi ukulandisa indaba uSamuel Eto'o njengoba enesifo senhliziyo kuGeorgette Tra Lou, okufanekiselwa ngezansi.
Akagcini nje ngokusekela umsebenzi wakhe nokunyakaza kodwa ujabulela amasheya ngendlela yakhe yokuphila enhle.
USamuel Eto'o noGeorgette Tra Lou bebelokhu bengabangane bamantombazane nabangane abangcono kakhulu, kuze kube yilapho ubungane babo beqeda uMshado. UGeorgette noSamuel Eto'o bathatha umshado ngo-2004 futhi ngemva kweminyaka eyishumi benomshado omkhulu omhlophe eMilan.
UGeorgette unina wabantwana abane bakaSamuweli abahlanu; Maelle, Etienne, Sienna futhi Lynn. Umntwana wokugcina kaSamuel Eto'o Annie (okufanekiselwa ngezansi nomama wakhe) wazalwa ngu-Eto'o lover; UBarcaca, ongumculi wezinwele wase-Italy.
USamuel Eto'o Ingane Yendaba Yabantwana Plus Untold Biography Facts-Ukuphikisana kweminyaka
Kuzokhunjulwa ukuthi ngesikhathi esithile ku-2014, uJoseph Mourinho wayenenkinga ngokuthola iminyaka engu-Eto yangempela.
Kwaba yinkinga emva kokuba uJoseph Mourinho ekhumbule ingqondo yakhe ngesikhathi ekhuluma ngokushicilela kanje:
"Inkinga nge-Chelsea anginakho umqeqeshi ... Ngine-Eto'o kodwa uneminyaka engu-32 ubudala, mhlawumbe i-35, owaziyo?"
Ekuseni ukuphikisana kukaSamuel Eto'o, owayengumthandi wakhe nomama wakhe endodakazini yakhe, u-Annie, wakhulume ngomphakathi ngemuva kokuphikisana okwedlule ku-2014 ngokuqaphela lokho;
"Ngicabanga ukuthi uSamuweli akayona i-35 engaphezu kwe-39 ... USamuel wazalelwa ku-1974 ngakho-ke okwenza ukuthi kube yi-39 manje."
Ngenkathi ukucatshangelwa kwemibono kanye nemibono ehlukile akukho ukuphika ukuthi iminyaka yobudala ka-Eto iyaziwa kakhulu. Uphendule kuJose Mourinho ngokuhlekisa izinkomba. Uqale wabhekana njengendoda endala ethatha inhlanzi ngaphambi kokugubha kwakhe umgomo owawuveza njengendoda endala.
USamuel Eto'o Ingane Yendaba Yabantwana Plus Untold Biography Facts-Amabhizinisi Nokutshalwa Kwezimali E-Afrika
USamuel Eto'o ungumnikazi wezinkampani eziningana ngaphakathi nangaphandle kwe-Afrika. Ngokungafani nabalingani bakhe abaningi abavame ukuhlanganisa umcebo futhi batshale imali emazweni angaphandle, uSamuweli wenze okuningi ekutshaleni imali e-Afrika.
USamuel Eto'o ungumnikazi wezindlela zomhlaba wonke okhiqiza amahembe, ama-caps nama-sneakers okubhekiswe emakethe nasendaweni ngamazwe ngezigidi zokubhukuda ekutshalweni kwezimali kanye nezinzuzo.
Ngaphandle komkhiqizo wefashini, u-Eto'o unesithakazelo sokuthengisa embonini yezokuxhumana yase-Afrika, enomunye wezinkampani ezimbalwa zokuxhumana eziphumelelayo eCameroon okuthiwa u-Eto'o Telecoms.
Ku-2017, u-Eto'o wavula indawo yokudlela yaseChina emadolobheni aseChicago, indawo yokudlela eyayibonisa uthando lwakhe nesithakazelo ekudleni kanye nomqondo wayo webhizinisi.
USamuel Eto'o Ingane Yendaba Yabantwana Plus Untold Biography Facts-U-Philanthropy
Umlando kaSamuel Eto'o uyisihluthulelo ekukhuleni kwakhe. Ukubuka umndeni wakhe ukulahla ngokuthembela kubaba wakhe we-Accountant ukuze athole imali encane eyenziwe ngokudayiswa kwezinhlanzi (unina) kuye kwasiza umlando wezemidlalo ukhulise uzwela kubantu abangenampofu nabampofu emphakathini, ezweni kanye nezwekazi lakhe
Ku-2006, uSamuel Eto'o wakhetha i-football academy ebizwa ngokuthi uSamuel Eto'o Laikipia Football Academy, isikhungo sezemfundo nesikole esasakazeka kulo lonke elase-Afrika. Umgomo wakhe ukugqugquzela uthando lo mdlalo ngenkathi kuqhutshwa umoya wezemidlalo kubantwana naseNtsheni ngokufanayo.
Ngaphezu kwalokho, u-Eto'o uye wakhiqiza amanoveli amahluzo ayisishiyagalolunye / incwadi yamahlaya esekelwe empilweni yakhe kanye nendaba yebhola. Iningi lezilaleli zakhe ziyizingane nabasha abazimisele ukuzithuthukisa ngokwakha amaphupho abo ebhola kanye nokuthandwa.
USamuel Eto'o Ingane Yendaba Yabantwana Plus Untold Biography Facts-Inselele Ngokubandlulula
Akusekho izindaba ukuthi abadlali abaphumelelayo base-Afrika bavame ukubhekana nokucwaswa ngokobuhlanga emazweni abo okudlala. USamuel Eto'o akayona into ebhekene ne-social anomaly njengoba elwa nokucwaswa ngokobuhlanga cishe yonke imisebenzi yakhe yebhola. Ukusuka eSpain kuze kube eRussia ukukhuluma ngambalwa.
Ku-2006, uSamuel Eto'o uhlaselwe ngokucwaswa ngesikhathi kudlalwa umdlali we-Real Zaragoza eSpain. Uye wabhalwa ngamabhongo ngesilwane, inkulumo yama-racist engafani nhlobo nokwelashwa okuhlangene nomlingani wakhe waseNigeria, u-Osaze Odemwingie eRussia.
Njengoba esenele ngokwanele, u-Eto'o ngesikhathi exoxwa ne-CNN, wakhononda ngokungakhathali mayelana nokucwaswa ngokohlanga ngokobuhlanga ayebhekene nawo ezweni lonke ayelidlalele ngokusho lokho.
"Abantu bayaphikelela ekubandleni ubuhlanga eRussia kodwa lo mcimbi uwonke jikelele. Angisho ukuthi angikaze ngizwe ngokuhlukunyezwa ngokobuhlanga lapha: bekungeke kwenzeke. "
USamuel Eto'o Ingane Yendaba Yabantwana Plus Untold Biography Facts-Kuhle
USamuel Eto'o ungumhambi, oyisimo esihlakaniphile. Ngenxa yomsebenzi wakhe webhola owamenza wadlala eSpain, eNgilandi, eRussia, eQatar, eTurkey, e-Italy, ukukhuluma ngambalwa. Ngokuphelele, uSamuel Eto'o wadlala ibhola lezinkampani kumaqembu ayishumi nanye emazweni ayisithupha !.
Ukunikeza ingxoxo ku Courier Russia ku-2012 Eto'o wembula lokho akuthandayo mayelana namadolobha amabili athande kakhulu.
"Ngithandekayo eNew York naseMoscow kwangenza ngacabanga ngoba akalokothi alale. Ngehora lesibili ekuseni, kuyohlale kuvulekile indawo yokudla noma yokuphuza. I-Moscow inikeza lokhu kungenzeka ukuthi amahora angamashumi amabili nane ayoba ngamashumi amabili nane. Lo muzi ushintsha sonke isikhathi. Ngesikhathi sokugcina ngaya eholidini futhi babekhulisa isakhiwo lapho ngangihlala khona. Inyanga nengxenye kamuva, konke kwase kuqedile. NjengaseNew York, abantu abakaze bayeke. Ngithanda le ngqondo lapha. "
USamuel Eto'o Ingane Yendaba Yabantwana Plus Untold Biography Facts-Izindaba zobuntu
Isici esiyinhloko esivela ku-Eto'o sinokuthokozisa kwakhe futhi ngezinye izikhathi ukudlala ngendlela edlala ngayo lapho ebonisa khona ngesikhathi sokuxhumana. Umdlali wase-Afrika ohlotshisiwe kakhulu wezinye izikhathi ubonisa nokubonisa okuhle komlingiswa oqinile kokubili emgqeni nasemuva.
Ukuzitholela konke, unothando olukhulu kakhulu emndenini wakhe futhi uhamba ubude ukuze abagcine bevalekile.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Samuel Eto'o Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
I-International Order NgoMashi 16, 2019 E-4: 33 pm
Izindaba ezimnandi engangizifuna isikhathi eside. Sonke sizuza uma sifunda ukuhlukahluka kwezizinda zamasiko nezendawo zabantu abasithandayo.